María Oruña sy Los Libros del Puerto Escondido | Literatiora Vaovao
Boky nosoratan'i María Oruña
John Ortiz | 05/01/2022 02:03 | mpanoratra, boky, Noely mainty
Landscape of Suances
María Oruña dia mpanoratra espaniola izay namirapiratra teo amin'ny tontolon'ny literatiora noho ny tantarany nalaza: Ireo boky Puerto Escondido. Ny asa mitovy anarana izay nanomboka ny andian-dahatsoratra tamin'ny 2015 -Seranana miafina- Nadika tamin'ny fiteny maro izy io ary nitarika ny fahombiazan'ny fizarana manaraka. Ao anatin'ny fitantarany dia misongadina ny toetra mahatsinjo an'i Valentina Redondo, izay nomena ny anarany ho fanomezam-boninahitra ny literatiora Dolores Redondo.
Oruña dia miavaka amin'ny hafetsen'ny famariparitany ny firafitry ny sanganasany, izay manana anjara toerana manokana ny tontolon'ny Espaniola. Toy izany ny fiantraikan’ny asany amin'io faritra io, izay notokanan’ny Filankevitry ny Tanànan’i Suances tamin’ny taona 2016 ny Lalana Literatiora Puerto Escondido. Ao anatin'izany ianao dia mandeha amin'ny toerana samihafa any Cantabria izay manan-danja amin'ny andiany.
1 Boky nosoratan'i María Oruña
1.1.1 Seranana miafina (2015)
1.1.2 Toerana ho aleha (2017)
1.1.3 Aiza izahay no tsy resy (2018)
1.1.4 Inona no Afenin'ny Tide (2021)
1.2 Boky hafa nosoratan'ny mpanoratra
1.2.1 Ny alan'ny rivotra efatra (2020)
2 Momba ny mpanoratra, María Oruña
andian-dahatsoratra Ny boky Puerto Escondido
Seranana miafina (2015)
Navoaka tamin'ny Septambra 2015, tantara momba ny heloka bevava izay nanombohan'ny mpanoratra ny tantara malaza. Ao Cantabria no misy ny tantara ary mivelatra amin'ny dingana roa ny tantara: amin'izao fotoana izao sy ny taona nisian'ny ady an-trano espaniola. Ao amin'ny tantara, Oliver Gordon, Valentina Redondo ary Lieutenant faharoa Sabadelle no mpandray anjara amin'izao fotoana izao; raha ny zavatra niainan'ny fianakaviana Fernández kosa no tantaraina taloha
Nandova trano fanjanahantany i Oliver —Villa Marina— eo amoron-dranomasina any Cantabria. Taorian'ny nahafatesan'ny reniny dia nanapa-kevitra ny hanova ilay trano ho trano fandraisam-bahiny ilay tovolahy anglisy. Tsy nampoizina, ny fanavaozana dia tokony hajanona, toy ny Hitan’izy ireo ny fatin’ny zazakely nafenina eo akaikin'ny tarehimarika Mesoamerican amin'ny rindrin'ny trano.
Taorian'ny fahitana mahatsiravina, misy vono olona hafa mitranga eo amin'ny manodidina ny tanàna, heloka bevava izay, mahagaga, toa mifandray. Avy hatrany dia niroso tamin’ny fikarohana an’ilay mpamono olona ny vondron’ny mpitandro filaminana mpanao famotorana notarihin’ny Lietnà Valentina Redondo sy ny Lietnà faharoa Sabadelle. Mandritra izany fotoana izany, i Oliver dia mahita tsiambaratelon'ny fianakaviana izay mitondra azy amin'ny fotoan-tsarotra ao amin'ny firenena: ny ady an-trano espaniola.
Seranana miafina (Heloka...
Toerana aleha (2017)
Izy io no andiany faharoa amin'ny andiany. Izy io dia tantara momba ny heloka bevava navoaka tamin'ny Febroary 2017 ary, toy ny boky voalohany, dia napetraka ao amin'ny Suances. Nitranga volana maromaro taorian'ilay tetika teo aloha ilay tantara ary nipoitra teo afovoan'ny famonoana olona iray. Izy io indray dia handraisana an'i Valentina Redondo, Oliver Gordon ary ny vondrona polisy.
Taorian'ny fotoana mangina tao amin'ny tanànan'i Cantabria, hita tao anaty korontan-trano efa tranainy ny fatin’ny vehivavy iray. Napetraka tamim-pitandremana teo amin’ilay toerana ilay faty, nanao akanjon’ny mpanjaka tamin’ny Moyen Âge, ary ankoatra izany, dia nisy zavatra tsy fahita firy teny an-tanany. Nanaitra ny mpitandro filaminana sy ny mponina teny amin’ny faritra ny vokatry ny fizahana razana.
Taorian'ity hetsika ity dia nirongatra ny onjan'ny vono olona tany an-toerana, izay manetsika ny fanairana indray. Raha jerena ny toerana mahatahotra, Ny Lieutenant Redondo sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny Guard Civil dia nanapa-kevitra ny hanomboka ny fihazana ilay mpamono olona.. Amin'ny lafiny iray, i Oliver dia manampy namana iray hitady ny rahalahiny tsy hita, toe-javatra iray izay mitondra vokatra mahagaga amin'ny farany.
Izay tsy naha resy antsika (2018)
Toy ny teo alohany, Izay tsy naha resy antsika dia mampientam-po izay mitranga any amin'ny morontsirak'i Suances. Navoaka tamin'ny taona 2018 izy io ary mbola misy an'i Valentina sy Oliver indray. Amin'ity indray mitoraka ity, tsy mifandray amin'ireo boky teo aloha ny tantara ary nampiana ny lohahevitra paranormal..
Tsy andrin'i Valentina ny faran'ny fahavaratra handehanana vakansy miaraka amin'i Oliver. Saingy mivadika ny zava-drehetra rehefa mahazo ny antso ho an'ny tranga vaovao: maty ny mpanao zaridainan’ny Lapan’ny Tompo. Ity trano ity dia tsy nisy olona nandritra ny fotoana kelikely, na izany aza, ny mpanoratra Carlos Green, izay nandova ny trano, dia nifindra vao haingana.
Amin'ny voalohany, noheverina fa noho ny antony voajanahary no nahatonga ny fahafatesan’ilay lehilahy, fa tamin’ny fanadihadiana natao dia nisy olona nikasi-tanana ilay faty. Nahazo hery ny teoria rehefa nanadihady an'i Green i Valentina ary niaiky izy fa nokorontan'ny sampana mistery izy tamin'ny alina.
Na dia misalasala momba ny paranormal aza ny lietnà, izy sy i Oliver ary ny ekipany dia tratran'ny tranga tsy hay hazavaina.. Mandrisika azy ireo hiatrika ny fanadihadiana amin'ny paradigma hafa izany, izay miteraka zava-baovao tsy mampino momba ny lapa sy ny olona miroboka amin'ny zava-mitranga.
Tany amin'ny toerana tsy naharesy antsika...
Izay afenin'ny onja (2021)
Izy io no tantara vaovao farany nataon'ny mpanoratra ary andiany farany amin'ny andiany Ny bokin'i Seranana miafina. Mampientanentana mahaleo tena izy io izay i Lieutenant Valentina Redondo sy ireo mpiara-miasa aminy avy amin'ny polisy mpanao famotorana no mbola mpilalao. Tamin'ny Novambra 2021, tany Espaina, ny asa dia nahazo ny fanavahana ny boky fiction tsara indrindra amin'ny taona nataon'ireo mpivarotra boky "El Corte Inglés".
Manana fotoan-tsarotra i Valentina. Mifanitsy amin'izany, nisy trangan-javatra mahatsiravina nitranga tao an-tanàna: Judith Pombo —Filohan'ny federasiona tenisy Santander— hita faty. Hita tao amin’ny kabin’ny sambo iray ny fatiny, vao avy nihaona tamin’ireo vahiny voafantina.
Ny fanadihadiana dia ho fanamby ho an'ny Lt. Redondo sy ny ekipany, izay miatrika heloka bevava tsy mampino indray. Hita tao amin’ny efitrano mihidy avy ao anatiny ilay ramatoa manan-danja ary nahitana ratra nahafaty olona tsy fahita firy, izay mameno ny zava-misy amin'ny zava-miafina. Toa zavatra avy amin'ny iray amin'ireo tantara momba ny heloka bevava nataon'i Agatha Christie na Edgar Allan Poe ilay sehatra.
Inona no afenin'ny rano:...
Boky hafa nosoratan'ny mpanoratra
Ny ala amin'ny rivotra efatra (2020)
Izy io no boky fahefatra amin'nyhttps://www.actualidadliteratura.com/entrevista-con-maria-oruna-la-autora-de-el-bosque-de-los-cuatro-vientos/ Oruña, dia navoaka tamin'ny Aogositra 2020 ary hatramin'izao dia asan'ny tsirairay. Tantara mifono mistery napetraka ao Santo Estevo, any Galicia. Mivelatra amin'ny fe-potoana roa ny tantara: lasa - taonjato faha-XNUMX - ary ankehitriny, mifamatotra amin'ny fifandraisan'ny olona.
Ao amin'ny 1830, Dr. Vallejo dia nandeha niaraka tamin'ny zanany vavy Marina nankany amin'ny Monastera Santo Estevo, any Ribas del Sil ao amin'ny Ribeira Sacra. Rehefa teo amin'ny toerany, manamafy ny tenany ho dokotera ilay lehilahy ny fiangonana sy ny tanàna. Ho an’ny tenany, ho sahiran-tsaina ity tovovavy ity eo anelanelan’ny faniriany hianatra momba ny fitsaboana sy ny fandavan’ny fiaraha-monina ny fomba amam-panao tamin’izany fotoana izany. Toy izany no hiainan’izy ireo ireo hetsika mifandraika amin’izany izay hanamarika ny ho avy.
Efa ho roanjato taona taty aoriana, tonga tao amin'ny Monastera taloha ilay anthropologist Jon Bécquer, nentanin'ny fahaizany mikaroka ireo sanganasan-kanto very. Ao amin'io toerana io no nahafantarany angano fahiny, feno fahalianana ary nanapa-kevitra ny hanadihady. SAINGY misy zavatra tsy nampoizina: tovolahy iray mitafy Benedictine no hita faty ao amin’ny zaridainan’ny fitoerana masina.
Tafiditra amin'ny fanadihadiana ny zava-misy i Bécquer, ary Ny zava-drehetra dia manondro fa ny zava-nitranga dia mifandray amin'ny lasa feno tsiambaratelo. Avy eo, ny iray dia mihetsika tsy tapaka eo anelanelan'ny vanim-potoana roa, ny "angano amin'ny peratra sivy" dia misy ary manana anjara toerana lehibe.
Ny ala efatra...
Momba ny mpanoratra, María Oruña
María Oruña dia mpisolovava sy mpanoratra Galisiana teraka tao Vigo tamin'ny 1976. Nandritra ny folo taona izy dia nanao lalàna teo amin'ny sehatry ny asa sy ny varotra. Vokatr'izany traikefa izany dia namoaka ny bokiny voalohany izy: Tanana mpandefa zana-tsipìka (2013). Ity fitantarana ity dia momba ny fanorisorenana matihanina sy ny tsy rariny. Tamin'ny 2015 dia nanolotra ny thriller izy seranana miafina, izay nanomboka ny tantara malaza Ireo boky Puerto Escondido.
Mandrak'izao, Ny andian-dahatsoratra dia manana tantara telo fanampiny: Toerana aleha (2017), Izay tsy naha resy antsika (2018) ary Izay afenin'ny onja (2021). Toy izany koa, ny fanangonana azy dia mifameno amin'ny asan'ny tsirairay: Ny ala amin'ny rivotra efatra (2020).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » Literatura » boky » Boky nosoratan'i María Oruña
Boky momba ny Magy. Fifantenana tantara sy angano
Domingo Buesa. Resadresaka nifanaovana tamin'ny mpanoratra ny The afternoon nandoro an'i Zaragoza
Raiso ny vaovao farany momba ny boky ao amin'ny mailakao
Boky 1 tapitrisa maimaim-poana amin'ny fitaovana rehetra?
Andramo maimaim-poana izany!